Gabateewwanii fi Galmeewwan Unkaa Barbaaduu
Wardiiwwanii fi galmeewwan keessaa kan keessatti to'anoowwan unkaa faayidaa irra oolan, sajoo Kuusaa Faayilii kabala unkaa irraa qaaqa bantee barruu fi gatiiwwan kamiyyuu argachuuf cuqaasuu ni dandeessa.
Dirreewwan deetaa tokko keessa yookiin hundaa keessa barbaaduu ni dandeessa. Barruun dirqama jalqabarratti, dhumarratti yookiin bakka kamiyyuu dirree deetaa akka taa'u filachuu ni dandeessa. Turbaa abbalaa ? fi * akka qaaqa Argadhuu Bakka buusi keessaatti fayyadamuu ni dandeessa. Odeefannoo dabalataa waa'ee dalaga barbaacha kuusdeetaa Gargaarsa LibreOffice keessaa argachuu ni dandeessa.
Gingilchaa Unkaatiin Barbaaduu
Title is: Gabateewwanii fi Galmeewwan Unkaa Barbaaduu